Anne Rice: akụkọ ndụ ya na akwụkwọ kacha mma | Akwụkwọ akụkọ
Isi: La Razón
Disemba 11 abịala na rịbọn ojii n'ụwa akwụkwọ. Ma ọ bụ na otu n'ime ndị odee ama ama na mba ụwa, Anne Rice anwụọla n'ihi ọrịa strok. Nwa ya onwe ya bu onye weputara akuko obi ilu:
"Ọ na-agbawa obi m ịgwa gị na n'isi ụtụtụ a, Anne nwụrụ n'ihi nsogbu n'ihi ọrịa strok," nwa ya nwoke Christopher kọwara na soshal midia. Ọ dị afọ iri asatọ. A ga-eli onye odee ahụ n'ime ụlọ mausoleum ezinụlọ na Metairie Cemetery na New Orleans na emume nzuzo. A ga-enwe Lestat, na Louis, na Pandora, na, dị ka mgbe niile, Stan onye dere, sị: «Tinye ọnụ gị na m. Hapụ onwe gị na àmụmà na ọkụ, n'ihi na egwu bụ nrọ nrọ nke ihe na-eme mgbe a nwụsịrị.
1 Anne Rice, eze nwanyị vampires
1.1 Akụkụ ya dị ka onye edemede
2 Akwụkwọ kacha mma Anne Rice
2.1 Ajụjụ ọnụ nke vampire
2.2 The mummy ma ọ bụ Ramses onye a bụrụ ọnụ
Anne Rice, eze nwanyị vampires
Isi mmalite foto Anne Rice: elperiodico
Ị maara na Anne Rice abụghị n'ezie aha ya? A mụrụ ya na New Orleans na 1941 na aha ya bụ Howard Allen O'Brien. Otú ọ dị, ebe ọ bụ na ọ dị obere, ọ chọrọ ka a kpọọ ya Anne. O nwekwara ezi ofufe na mmasị maka vampires na ndị amoosu.
Banyere ndụ onwe ya, a maghị ọtụtụ ihe karịa nke ahụ Na 1961, mgbe ọ dị afọ 20, ọ lụrụ onye na-ede uri na onye na-ese ihe bụ Stan Rice Onye ya na ya dị afọ 41, ruo mgbe ọ nwụrụ na Disemba 11, 2002 (ee, otu ụbọchị na ọnwa ahụ Anne Rice nwụrụ).
N'ihi alụmdi na nwunye ahụ, a mụrụ ụmụ abụọ, Michelle, bụ onye n'ụzọ dị mwute nwụrụ mgbe ọ dị afọ ise n'ihi ọrịa leukemia; na Christopher Rice, onye gbasoro nzọụkwụ nne ya ma bụrụkwa onye gosipụtara ọnwụ ya.
Akụkụ ya dị ka onye edemede
N'ọkwa agụmagụ. Anne Rice edebeghị akwụkwọ ya naanị n'okpuru "pseudonym" a., ma ọtụtụ ndị ọzọ ka a maara dị ka Anne Rampling ma ọ bụ AN Roquelaure (nke a kpọmkwem maka isiokwu ndị okenye).
Akwụkwọ mbụ mere ka onye dere ya nwee ihe ịga nke ọma bụ Ajụjụ ọnụ nke vampire, nke e dere na 1973, ọ bụ ezie na e bipụtara ya afọ atọ ka e mesịrị, na 1976. Ihe ịga nke ọma dị otú ahụ bụ na ha mesịrị wepụta fim dabeere n'akwụkwọ ahụ mere vampires ejiji. Nke a bụ akwụkwọ mbụ dị na saga, The Vampire Chronicles, na atọ ndị mbụ ka emegharịrị, n'agbanyeghị na enwere ohere ka ukwuu n'etiti nke mbụ na nke ikpeazụ.
Akwụkwọ mbụ a, na ọtụtụ ndị ha hụrụ mgbe e mesịrị, ebe ọ bụ na e kwuru na o dere ihe karịrị 30 akwụkwọ akụkọ na dị ka ọtụtụ akụkọ na akwụkwọ ndị ọzọ pseudonyms na-aga na-ahụghị. N'ezie, a na-ekwu na ọtụtụ ndị fan na-ama ụlọikwuu n'azụ ụlọ ya ịhụ ya na / ma ọ bụ gwa ya okwu mgbe ọ na-apụ, karịsịa mgbe ọ na-aga mgbakọ.
Ọ bụ eziokwu na, n’afọ ndị na-adịbeghị anya, o debeghị ọtụtụ ihe, o kwubeghịkwa ọtụtụ ihe banyere ya, na mgbakwunye na ọ dị ntakịrị ihe ahụ o zutere banyere nyocha ndị na-adịghị mma nke okwu ndị o ji mee ihe na otú e si agwa ya okwu. ndị na-agụ ya abụghị ndị kasị nwee ihe ịga nke ọma.
Ma nke bụ eziokwu bụ na talent o nwere bụ obi abụọ adịghị ya, ọ bụghị nanị na-akọ akụkọ ebe vampires bụ protagonists nke ibe na nkata, ma o nwekwara ike imezu otu ihe ahụ na ọtụtụ ndị ọzọ odide.
Akwụkwọ kacha mma Anne Rice
Ma ị maara Anne Rice na mbụ, ma ọ bụ na ị chọtara onye edemede na nso nso a, obi abụọ adịghị ya na, N'ime ọtụtụ akwụkwọ ya, e nwere ụfọdụ ndị anyị na-aghaghị ịkọwapụta maka ihe ịga nke ọma ha nwere n'oge ha mgbe ha pụtara dị ka kwa ezigbo okwu si n'aka ndị na-agụ. A sị ka e kwuwe, ha bụ ndị mere Anne Rice ka ọ bụrụ onye edemede a kacha mara amara na isiokwu paranormal.
Ị chọrọ ịma ihe akwụkwọ ndị ahụ bụ?
Ajụjụ ọnụ nke vampire
Ajụjụ ọnụ na vampire...
Anyị na-amalite na Ajụjụ ọnụ na vampire, nke mbụ nke saga The Vampire diaries, n'ihi na n'oge ọ pụtara na ọ bụ ọganihu. Ruo n'ókè nke mee vampires fashionable n'oge ahụ, na ọzọ mgbe ihe nkiri ahụ pụtara.
N'ime ya anyị na-ahụ vampire nke kpebiri inye onye nta akụkọ ajụjụ ọnụ nke ọ chọrọ ịkọ ndụ ya dum, site na tupu ọ ghọọ vampire ruo n'oge ahụ mgbe ọ na-akọ akụkọ ya.
The mummy ma ọ bụ Ramses onye a bụrụ ọnụ
The mummy (ma ọ bụ Ramses na ...
Akwụkwọ a bụ nke "vampires" adịghị apụta na nke ahụ nwere ike iju gị anya ntakịrị ma e jiri ya tụnyere ihe Anne Rice na-eji anyị. Ma nke bụ́ eziokwu bụ na ọ bụ otu n’ime ndị kasị mma nke odee, nke mere na, ozugbo ị rutere n’akụkụ ụfọdụ, ị gaghị akwụsị ịgụ akwụkwọ ahụ ruo mgbe ọ gụchara.
N'okwu a, Ọ bụ ezie na akwụkwọ ahụ yiri ka ọ bụ banyere Ijipt oge ochie, nke bụ eziokwu bụ na nkata ahụ emeghị ebe ahụ, kama na London na n'etiti narị afọ nke XNUMX.. Otu n'ime akwụkwọ akụkọ ịhụnanya nwere ụdị nkata mbụ nke na ị gaghị echefu ya.
Ntọọrọ nke Mma ...
N'okwu a, ị gaghị enwe ike ịchọta akwụkwọ ndị a n'aha ha, kama site na aha ha bụ AN Roquelaure. Ọ na-agụnye: Ntọhapụ nke Mma ụra; Ahụhụ nke ịma mma ihi ụra; Ntọhapụ nke ịma mma ụra; na Alaeze nke ịma mma ụra.
Ọ bụ tetralogy erotic, ya mere o bipụtaghị ya n'aha ọ na-emebu. Mana akọwara nke ọma wee gwa ya na ọ na-edobe gị nhụsianya na ọ bụ otu n'ime akwụkwọ akụkọ kacha mma o nwere.
N'ịkọwa BDSM na mmekọahụ agụụ mmekọahụ, onye odee kere akụkọ n'ihu nke akụkọ ụmụaka. Naanị, na nke a, ọ nweghị ihe jikọrọ ya na ya.
Nke a bụ otu n'ime akwụkwọ akụkọ na-emechi onwe ya nke, dị ka nke gara aga, o bipụtara n'okpuru aha ụgha ọzọ. Na nke a, ị nwere ike ịhụ "akụkụ" ọzọ nke onye edemede, ebe ọ na-akọ akụkọ ebe mmekọahụ na-adịghị mma na ihe odide ahụ na-eri ahụ.
Ọ bụ akụkọ a onye na-ese ihe ụmụaka na nwa agbọghọ, na-erubeghị afọ iri na ụma, nke na-emecha nweta obi nke mbụ. Ruo n'ókè na mmekọrịta ha na-amalite inwe bụ ihe na-adịghị mma nke na ọ gafere oke.
Ma enwere ọtụtụ akwụkwọ akụkọ Anne Rice, mana nke a bụ obere ụtụ anyị. Kedu ndị ị ga-akwado? Kedu ndị mere gị akara?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ndị edemede » Anne Rice: biography na ya kasị mma akwụkwọ
María Jesús Romero si Ávila Lara. Ajụjụ ọnụ